Taariikhda Finland - InfoFinland
Warar ku saabsan Finland > Warar aasaasi ah oo ku saabsan Finland > Taariikhda Finland
Finland waxay mar walba aheyd goob yar oo waqooyiga ku taal una dhexeysa bariga iyo galbeedka. Taariikhda Finland waa sheego ku saabsan marinno ganacsi, kulan-dhaqameedyo iyo nolol ku dhinac taal wadamo waaweyn oo deris ah.
Taariikhdi hore ee Finland -1323
Soonaha Finland waa la deganaa laga soo billaabo xilliga barafka, qiyaas ahaan sannadki 8800 ka hor inta aan la billaabin tirinta taariikhda milaadiga ah. Deegaanku wuxuu marki hore ku bullaalay hareeraha marin-biyoodka, waxaana markasta soonaha Finland dhexmari jiray ganacsi xooggan. Magaalada u qadiimsan Finland waa Turku, magaceedu wuxuu ka dhigan yahay goob ganacsi.
Ilaha qoraalka ah ee Finland laga hayo waxay billowdeen sannadihii 1100-1200. Markaas waxaa Finland lagu safarka mucatabka lagula daray dhulka uu xukumi jiray Baadariga Rooma iyo shabakadda ganacsatada Hansa ee xilligi dhexe.
Kaniisadda Katooliga ayaa Finland uga soo fidday dhinaca Iswiidhan, kaniisadda Ortodhoksiguna waxay ka timid dhinaca bariga, Novgorod oo hadda ka tirsan dhulka Ruushka. Dagaalki dhulka ka dhashay ee u dhexeeyay Novgorod iyo Iswiidhan wuxuu ku dhammaaday heshiiski Pähkinäsaari ee dhacay 1323. Heshiiskaas wuxuu keenay in ay Finland saldhigto diinta katooliga ah ee Galbeedka iyo diinta Ortodoksiga ah ee bariga. Xadka diimahan u dhexeeya waa mid weli jirta, laakiin sifeynti diinta ayaa diinta Katooliga u beddeshay tan Luteeriga.
Qeybta bari ee Iswidhan 1323-1809
Nabaddi Pähkinäsaari kaddib inta badan dhulka Finland wuxuu qeyb ka ahaan Iswidhan. Taariikhda Finland waa qiyaas ahaan 500 oo sannadood taariikhda Iswidhan. Dhulka Finland wuxuu Iswidhan u ahaan jug-dhowraha ama difaaca bariga, xuduuduhuna marar badan oo dagaalo kala duduwan lagu jiray ayeey isbeddeleen.
Finnishku waxay isu heystaan in ay yihiin Yurubiinta Galbeedka, sababtoo ah mudadi ay kamid aheyd Boqortooyadi Iswidhan ayaa Finnishka si adag ugu xirtay dhaxalka dhaqanka Galbeedka. Tusaale ahaan askarta Finnishku waxay dagaalki soddonka sannadood socda ee Bartamaha Yurub ka qeybgaleen iyagoo ku jira ciidamada Iswidhan. Isla-wakhtigaas waxaa jiray si kastaba ha ahaatee xiriir lala lahaa xarumaha ganacsiga bariga iyo kaniisadda Ortodoksi.
1523 waxaa Iswidhan boqor ka noqday Kustaa Vaasa wuxuu Iswidhan ka saarfan midowgi wadamada Waqooyiga Yurub ee xilligi dhexe
1543 Finland waxaa ka soo baxay Aapinen ugu horeeyay oo ku qoran luqada Finnishka
1550 waxaa la aasaasay Helsinki si ay Tallin ugula tartanto ganacsiga Badda Baltiga
1640 waxaa Turku laga asaasay jaamacaddi ugu horeysay ee Finlan
Finland oo ka mid ah boqortooyada Ruushka 1809-1917
Ruushka ayaa dhulka Finland ka qabsaday Iswidhan 1808-18098. Boqor Ruushka Alexander I ayaa Finland siiyay derajada saldano weyn. Inta badan sharciyadi ka yimid wakhtigi Iswidhan waxay aheeyn kuwa sii shaqeynayay. Finland waxay isu-beddashay mudadi ay ku hoos-jirtay awooddi Ruushka dhul gaar ah oo lagu horumariyay amar ka soo baxay boqorki. Tusaale ahaan bartamaha Helsinki waxaa la dhisay inti uu Ruushka heystay.
Ruushku wuxuu laga billaabo sannadki 1899 gacan adag ku qabaty saldanadi Finland. Finland kama qeybqaadan dagaal koowaad ee adduunka, laakiin waddanimadu xittaa dhulka Finland waa saameysay. Finland waxaa loo ogolaaday baarlamaan u gaar ah sannadki 1906di doorashooyinki ugu horeeyayna waxaa la qabanqaabiyay 1907. Finland waxay ku dhawaaqday xornimadeedi 6.12.1917, xukuumaddi bolshefig ee xukunka kacdoonka ku qabsatayna waxay xoriyadda aqoonsatay 31.12.1917.
1812 Helsinki ayaa noqotay Caasimad
1827 Magaaladi qadiimka aheyd ee Turku ayaa dab ku baaba’ay, maqaamka Helsinkina wuxuu kor u kacay 1827
1860 Finland waxaa laga billaabay isticmaal lacag u gaar ah, maarkaha
1906 Xaqa isku midka ah ee codeynta guud, dumarka xittaa waa la siiyay
6.121917 Finland waxay ku dhawaaqday xornimadeeda
Marxaladihi hore ee xorriyadda 1917-1945
Muddadi billowga xorriyadda, maqaamka Finland wuxuu ahaa mid daciif ah. Wax yar ka dib helitaanka xornimada waxaa Finland ka qarxay dagaal dhiig sokeeye oo dhiig ku daatay. Dagaalku wuxuu u dhexeeyay ciidamadi ururki shaqaalaha casaanka iyo xukuumaddi caddaanka. Caddaanku waxay taageero ka heleen Jarmalka Casaankuna Ruushka. Dagaalki wuxuu ku dhamaaday guul ay caddaanki gaareen.
Finland waxay si aad ah ugu jirtay xeyndaabka uu Jarmalku saameynta ku lahaa, sababtoo ah Midowgi Sofiyeeti ayaa halis weyn ku noqday ammaanka dowladda. 1930kii aadki ururo badan oo midigta iyo midigta fog ah ayaa ahaa kuwa Finland laga jecelyahay sidi looga jeclaa wadamo kale oo Yurub ku yaal.
Agoosto 1939 ayeey Naasiga Jarmalka iyo Midowgi Soofiyeeti ku heshiiyeen in Finland ay noqoto safka hore ee Midowga Soofiyeeti. Finland waxay inti lagu jiray Dagaalki labaad ee Adduunka labo mar la dagaashay Midowgi Soofiyeeti iyadoo la safan Jarmalka. Finland labada dagaalba waa ku guuldareysatay, laakiin Midowgi Sofiyeeti marna ma uusan qabsan Finland.
Maadaama Finland ay ku guuleysatay wax yar ka dib xornimadeed in ay dhulkeeda difaacado inti ay dagaalladu socdeen, dagaalladi Finland ee 1940 loo arkay xilligi ay xornimada dowladda Finland salka adkeysatay.
Dhacdooyinka muhiimka ah
1918 Dagaalki sokeeye ee casaanka iyo caddaanka u dhexeeyay
1921 Sharciga waajibka waxbarashada ayaa qasab uga dhigay dhammaan lix sano jiryada in ay galaan dugsiga ummadda
1939-1940 Finland waxay qeyb ka noqotay dagaalki labaad ee adduunka, marki uu dagaalki jiilaalku ka dhex dhashay Finland iyo Midowgi Sofiyeeti
1941-1944 Dagaalki labaad ee adduunka ayaa isagoo dagaalki sii socday ah sii dhexmaray Finland iyo Midowgi Sofiyeeti
Dibu-dhiski, warshadoobista iyo dagaalki qaboobaa 1945-1991
Maadaama ay Finland ku guuldareysatay dagaalki waxaa qasab ku noqday in ay Midowgi Sofiyeeti u siiso magdhow dagaal oo alaab ahaan ah. Magdhow dagaal ahaan waxaa loo bixiyay tusaale ahaan tareenno, maraakiib iyo alaab ceyriin. Finland waxay dhismaha alaabta ku maalgelisay deyn iyo caawimaad. Soo saarista magdhowga dagaallku wuxuu Finland ka beddelay dalki ku tiirsanaa dhaqaalaha beeraha iyo xoolaha wuxuuna u beddalay wadan warshadeysan. Warshadoobista ayaa sababtay dhaqdhaqaaq looga soo guuray baadiyaha oo loo soo guuray magaalooyinka.
Finland iyo Midowgi Sofiyeeti waxay sannadki 1948 galeen heshiis dhigaya saaxiibtinimo, wadashaqeyn iyo iscaawin dhexdooda ah, kaas oo dhigayay in labada dowladood ay iska difaacaan halista bannaanka uga timaada. Finland waxay aheyd inti uu socday dagaalki qaboobaa oo dhan qeyb ka mid ah safka hore ee Midowga Sofiyeeti, siyaasadda dalka ee dibadda iyo gudahana waxaa hageysay cabsidi Midowgi Sofiyeeti.
1948 Heshiiski YYA ee dhexmaray Finland iyo Midowgi Sofiyeeti
1952 Ciyaarihi Olombikada ee Helsinki lagu qabtay
1968 Hay’adda dugsiga hoose-dhexe ee Finland ayaa la aasaasay
Ka mid noqoshadi Yurub 1991 ->
Dumista Midowga Sofiyeeti iyo korriinshihi dhaqaalaha ee deymihi 1980yadi ayaa Finland u keenay hoos u dhac dhaqaale 1990kii. Wakhtiga ugu xumaa ee dhaqaale xumo waxay aheyd billowgi 1990, xilligaas oo ay Finland ay joogeen dad shaqo la’aan ah oo badan, shirkaduhu waa kaceen, lacagaha dowladdu waa yaraadeen.
Qiyaasti billowga sannadki 1995 wixi ka dambeeyay ayaa waxaa Finland ka billowday koror-dhaqaale, kaas oo shirkaddi ugu muhiimsaneyd ay aheyd Nokia oo sameynaysay telefoonnada gacanta. Finland waxay xubin ka noqotay 1995 Midowga Yurub waxayna ku jirtaa wadamadi ugu horeeyay ee lacagta Yuurada qaata.
1991 Xasaraddi dhaqaale ee ugu xumeyd Finland
1995 Finland waxay ku biirtay Midowga Yurub
2000 Finland waxay heerka 1aad ka gashay baaritaanka akhris aqoonta ee PISA oo marki ugu horeysay la sameeyay
2002 Yuurada ayaa Finland looga qaatay lacagta kaashka ah ee dalka
2007 Nokia ayaa iibisay %40 telefoonnada gacanta ee dunida oo dhan
Dhisinta ladnaanta horumarka-Qarnigii Finland iyo reer Virtanen
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 12.08.2021 Boggan war-celin ka soo dir